शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा मोटर्सले मलेसियन प्रोटोन ब्राण्डका गाडी नेपाल भित्रयाउँदै, शोरुम तयार « Bizkhabar Online
शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा मोटर्सले मलेसियन प्रोटोन ब्राण्डका गाडी नेपाल भित्रयाउँदै, शोरुम तयार
18 November, 2020 9:24 am
काठमाडौं । शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा मोटर्सले मलेसियन प्रोटोन ब्राण्डका गाडी नेपाली बजारमा भित्रयाउने भएको छ ।
प्रोटोन मलेसियाको प्रतिष्ठित कम्पनीका रुपमा परिचित रहेको छ । शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा मोटर्स प्रोटोनका गाडीको आधिकारिक वितरक नियुक्त भएसँगै प्रोटोन ब्राण्डका गाडीका लागि काठमाडौंको नक्साल, गैरीधारामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक शोरुम सञ्चालनको अवस्थामा तयार पारेको छ ।
जगदम्बा मोटर्सले प्रोटोनको सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध गराउने छ । हाल फेस्टिभल सिजन भएको र यसपश्चात छिट्टै नै शोरुम शुभारम्भ हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
प्रोटोनको सोरुम आकर्षक स्पेस सहितको छ भने प्रोटोनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निर्माण भएको छ । यसले नेपाली ग्राहकलाई उत्कृष्ट अनुभव प्रदान गर्नुका साथै एक आकर्षक गन्तव्यको रुपमा समेत आफ्नो पहिचान कायम गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाली बजारमा प्रोटोनको पहिलो उपहारको रुपमा प्रोटोन सागा सेडान उपलब्ध हुनेछ । त्यसपछि अन्य मोडलका सवारी साधन समेत विस्तारै उपलब्ध हुँदै जाने छन् । प्रोटोन मलेसियाको पहिलो र प्रतिष्ठित अटोमोबाइल कम्पनी हो ।
मलेसियाका लोकप्रिय प्रधानमन्त्री डा. महाथिर मोहम्मदको बेबी प्रोजेक्टको रुपमा यो कम्पनी विकसित भएको थियो । हाल प्रोटोनका सवारी साधन विश्वका विभिन्न भागमा रुचाइने लोकप्रिय सवारी साधनमा पर्छन् । नेपाली ग्राहकलाई पनि प्रोटोनका उत्कृष्ट सवारी साधन आकर्षक सोरुममार्फत उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा टिभिएस एनटर्क १२५ को १ लाख युनिट विक्री, के छन यसका विशेषता ?
काठमाडौं । टिभिएस एनटर्क १२५ को विक्री अन्तरराष्ट्रिय बजारमा १ लाख युनिट पुगेको छ ।
होन्डा सीबी ३५० डीएलएक्स नेपालमा, मूल्य ७ लाख ५० हजार
काठमाडौँ । नेपालका लागि होन्डा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको अधिकारिक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले बहु होन्डाको
सिप्रदीद्धारा अत्यावश्यक सेवामा खटिएका सवारीलाई सेवा, २४ सय बढी सवारीसाधनले प्राप्त गरे सुविधा
काठमाडौं । सुरक्षा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न, तरकारी, ग्याँस, पानी, वित्तीय कारोबारमा संलग्नित, तथा
महामारीमै चम्केको बाईक सेयरिङ सेवा, १ बर्षमै १ तिहाईले बढ्यो आम्दानी
काठमाडौं । कोरोना भाईरस महामारीमा सबैभन्दा बढि पिडामा परेको क्षेत्रमध्ये एक हो यातायात क्षेत्र ।